WhatsApp WhatsApp: gwa ndị ahịa gị okwu ma melite atụmatụ gị | ECommerce ozi ọma
WhatsApp Business bụ ngwa n'efu maka ụlọ ọrụ
Ná ngwụsị nke 2017 na WhatsApp na-ezube ịmepụta ngwa ahịa azụmaahịa nke ngwa ngwa ahụ mezuru. Na mbido afọ a, ngwa azụmahịa nke WhatsApp pụtara maka nbudata n'efu ma site na mgbe ahụ ụlọ ọrụ malitere irite uru na ihe ọ na-enye.
N'okpuru anyị ga-agwa gị n'ụzọ zuru ezu gbasara ngwa azụmaahịa a yana atụmatụ ọ na-enye ma e jiri ya tụnyere ngwa ọkọlọtọ. Anyị ga-ahụkwa otú hazie WhatsApp Business na otu esi amalite profaịlụ azụmahịa gị.
1 Onye bụ WhatsApp Business maka?
2 Enwere nke a tupu?
3 WhatsApp Business isi atụmatụ
4 Nkọwapụta azụmaahịa na Azụmaahịa WhatsApp
5 Ngwaọrụ Izi ozi
6 Ndakọrịta Web Web
7 Kedu ihe ịchọrọ iji WhatsApp Business
8 Etu esi edozi Business WhatsApp?
Onye bụ WhatsApp Business maka?
Dị ka ọ tụrụ anya ya, WhatsApp Business bụ ngwa azụmaahịa lekwasịrị anya na ụlọ ọrụ. Emere ya site na ala iji nye ọrụ nke azụmahịa ọ bụla nwere ike iso ndị ahịa ya na-emekọrịta ihe.
El ebumnuche nke WhatsApp Business bụ ịnye mmelite, nkwado yana ike ịme azụmahịa gị ozugbo site na ekwentị mkpanaaka, niile site na WhatsApp, karịa site na saịtị ndị ọzọ dị n'ịntanetị.
Yabụ, ebe ndị ahịa ga-anọgide na-eji ngwa WhatsApp a na-emebu, onye nwe azụmaahịa ma ọ bụ onye njikwa ga-eji ya Ngwa azụmahịa WhatsApp.
Enwere nke a tupu?
N'ezie ee, ọ bụ ezie na ọ bụghị n'ọtụtụ a. Ọ bụrụ na anyị chọọ ntakịrị na Storelọ Ahịa Play, anyị ga-ahụ ọtụtụ ngwa ndị a na-emegharị maka mkpa nke ndị ọrụ azụmaahịa. Dịka ọmụmaatụ, Uber, nke na-enye ọrụ njem njem n'ịntanetị dabere na ngwa, nwere nsụgharị abụọ: Uber, nke bụ maka ndị ahịa, yana Uber Driver, nke bụ ngwa lekwasịrị anya na ndị ọkwọ ụgbọala na-enye ọrụ a.
Ọ bụ n'ezie dị nnọọ interface na ọgwụgwụ ọrụ, Otú ọ dị n'ihe banyere Azụmahịa WhatsApp na-akwado ngwa izi ozi ya na otutu nde ndi oru n’uwa nile, ya mere iru ya kariri.
O zuru oke iji mepụta ngwa dị iche, ebe ọ bụ na ịchọrọ ijere ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ụlọ ọrụ, n'agbanyeghị ma ọ bụ ụlọ ọrụ mpaghara, ọrụ ndị ọkachamara, ụlọ ọgwụ ma ọ bụ ọbụlagodi gọọmentị n'onwe ya.
WhatsApp Business isi atụmatụ
Iji malite, Azụmahịa WhatsApp bụ n'efu, nke pụtara na ị nwere ike ime ndepụta nke azụmaahịa gị ma na-akpọtụrụ ndị ahịa gị niile na-akwụghị ụgwọ. Inwe nkwado nke a Applicationzi ozi ngwa na-enye gị ohere iji zipu ozi, ndị omenala ma dị oké ọnụ SMS, nwere ike dị nnọọ anya-ejighi oru.
Anyị nwekwara isi ọrụ nke ndị ahịa izi ozi enwetara na Facebook ma ọ bụ n'ihi na anyị nwere ike budata whatsapp n'efu Ruo ogologo oge, enwere ndị ọrụ na-arụsi ọrụ ike na ọnụọgụ nde mmadụ.
Mgbe ụlọ ọrụ nwere ike ịtinye ndị ahịa ya - ozi ahia n’enweghi ike igakwuru ndi na-ahu maka nkwukọrịta n’ezie nke ahụ bụ uru nke siri ike ileghara anya. A na-enweta ọrụ ozi, nkwalite, wdg, site na WhatsApp.
N'ezie ihe a niile na-ebelata ihe ego nke izipu ozi ederede SMS, ma n'otu oge ahụ ọ na-emekwa ka o kwe omume ịmata ma ozi sitere na otu ọrụ sitere na ndị na-eweta ọrụ gosipụtara. Ọbụghị naanị nke ahụ, Azụmaahịa WhatsApp na-ewepụkwa mkpa obere azụmaahịa ma ọ bụ nke onwe ha ịkwụ ụgwọ maka ọrụ a.
Ndị ahịa na-eritekwa uru dị ka ọrụ ahụ si na ebe a ma ama, ebe enwere ike wepu ozi spam ngwa ngwa.
Nkọwapụta azụmaahịa na Azụmaahịa WhatsApp
Banyere ọkọlọtọ atụmatụ, na profaịlụ azụmaahịa na azụmaahịa WhatsApp, nyere ndị ahịa aka inweta ozi dị mkpa dị ka adreesị ozi-e, adreesị anụ ahụ nke azụmahịa, weebụsaịtị ma ọ bụ nkọwa ọ bụla nke ụlọ ọrụ ahụ.
Nke a bụ ihe ọmụma zuru ezu nke na-enyere aka ịmepụta ọdịdị nke ụlọ ọrụ na WhatsApp. Site na ịbụ ụlọ ọrụ ekwenyela, a na-abawanye ezigbo na ndị ọrụ WhatsApp nwekwara ike ịmara na ụlọ ọrụ anaghị achọ iduhie ha.
Ngwaọrụ Izi ozi
Ihe omuma ozo nke Azụmahịa WhatsApp nwere njikọ na ngwaọrụ izi ozi ọ gụnyere. Dị ka azụmahịa ọ ga-ekwe omume ịmepụta azịza ngwa ngwa iji hụ na enwere ike ịza ajụjụ a na-ajụkarị ngwa ngwa.
Na mgbakwunye, enwere ike ịhazi ozi ekele iji webata ndị ahịa ụlọ ọrụ, ọbụlagodi Azụmahịa WhatsApp na-enye gị ohere ịmepụta ozi ndị ezighi ezi iji nọrọ mgbe awa gachara ma ọ bụ maka mgbe ọ gaghị ekwe omume ijere ndị ahịa ozi ozugbo.
Ngwa ahụ na-enyekwa ohere ịnweta ozi ndekọ ọnụ ọgụgụ nke enwere ike ịnweta data nke enwere ike iji mee ka ndị ahịa ghọta nke ọma ma nyekwa ọrụ ka mma, na-ekwe ka azụmaahịa ahụ tolite na usoro ahụ.
N'okpuru atụmatụ a WhatsApp azụmahịa na-enye ọnụ ọgụgụ ozi, ọrụ nke na-enye ndị nwe ọnụọgụ dị mfe gbasara ọnụọgụ nke ozi ezigara, ozi nyefere, ozi a gụrụ, ha niile na ebumnuche nke ọdịnaya nzaghachi ngwa ngwa ma ọ bụ atụmatụ eji akpọtụrụ ndị ahịa nwere ike gbanwee.
Ndakọrịta Web Web
Nke a bụ ihe ọzọ nke kacha mma WhatsApp Business atụmatụ, ka ọ na-enye ndị nwe ụlọ ọrụ aka ijikwa ọrụ ha n'ịntanetị, na-ejighị ngwa mkpanaka ahụ. Arụ ọrụ ahụ ezughi oke dị ka ngwa mkpanaka ahụ, mana a na-atụ anya na ọ ga-abụ mmelite n'ọdịnihu yana ka ụlọ ọrụ ndị ọzọ sonyere.
Kedu ihe ịchọrọ iji WhatsApp Business
Ọ dị mkpa ikwu na e nwere ụfọdụ ihe choro maka oru WhatsApp Business n'ihi uzo esi emebe WhatsApp. Iji malite, ịkwesịrị inwe smartphone na-arụ ọrụ na gam akporo (ugbu a enweghị ụdị nke iOS), yana ọnụọgụ iji nwee ike ịdebanye aha maka ọrụ ahụ.
Nọmba a ga-abụ ọnụ ọgụgụ gọọmentị nke ụlọ ọrụ a ga-eji ya oge ọ bụla anyị na ndị ahịa na-emekọ ihe. Ihe kachasị adaba bụ na ọ bụ nọmba dị iche, yabụ ma eleghị anya ihe kacha kwesị ekwesị bụ ịhọrọ maka kaadị SIM ọhụrụ. Ihe mere nke a nwere na-eme na Usoro nkwenye WhatsApp, ebe ọ bụ na ọrụ ahụ na-enye ohere ka enwere ọnụ ọgụgụ ekwentị na otu akaụntụ WhatsApp.
Yabụ, ọ bụrụ na WhatsApp ejirila nọmba gị ugbu a, ọ gaghị ekwe omume iji ya maka akaụntụ azụmaahịa na Azụmahịa WhatsApp. Ugbu a, gịnị na - eme ndị ọrụ nwere naanị kaadị SIM na ekwentị mkpanaaka? Ọfọn, na nke a ọ ga-adị mkpa nyefee data sitere na akaụntụ WhatsApp gị ugbu a na Profaịlụ Business na WhatsApp Business.
Ọ bụrụ na ihe ị chọrọ bụ ịnọgide na-enwe - nọmba nkeonwe metụtara na WhatsApp, mgbe ahụ ị ga-apụ ma zụta kaadị SIM nke abụọ, yana ịzụta ngwaọrụ mkpanaka ọzọ iji mee ngwa ahụ, belụsọ ma ị nwere ekwentị gam akporo nwere nkwado SIM abụọ.
Etu esi edozi Business WhatsApp?
Ọ bụrụ na inweela nọmba azụmahịa ị na-eji kachasị maka WhatsApp, mgbe ahụ ị ga-achọ nkwado ndabere mkparịta ụka gị na nchekwa igwe ojii mbụ. Iji mee nke a ị nanị ịnweta "Chats" ngalaba, mgbe ahụ, "Chats ndabere" na n'ikpeazụ pịa na "ndabere" nhọrọ.
Mgbe nke a gasịrị, ọ ga-adị mkpa ibudata WhatsApp WhatsApp site na Storelọ Ahịa Play iji wụnye ya na ekwentị. Na njedebe nwụnye ị kwesịrị ị na-agba ọsọ WhatsApp Business Ihe mbụ ị ga - eme bụ ịchọpụta nọmba ekwentị nke ụlọ ọrụ ahụ, nke ga - abụ otu nọmba ị ga - eji dị ka ụlọ ọrụ iji kpọtụrụ ma soro ndị ahịa gị na - emekọrịta ihe.
Ozugbo nọmba kwupụtara, ị ga - enwe nhọrọ iji weghachi mkparịta ụka gị metụtara nọmba ekwentị mkpanaaka. Ikwesiri ịtọ aha ụlọ ọrụ gị dị ka aha njirimara gị ma ozugbo ị nọ na ngalaba Nkata, pịa bọtịnụ menu iji nweta "Ntọala".
Site na ngalaba "Profaịlụ", na ngalaba "Azụmaahịa azụmahịa", ị ga-enwe ohere n'ọtụtụ mpaghara dị ka nke kaadị kọntaktị ka ị nwee ike itinye nkọwa niile nke ụlọ ọrụ gị nke ịchọrọ isoro ndị ahịa gị.
Mgbe ịmechara nke a, nhazi nke WhatsApp Business ga-ezu ma site na oge ahụ ị nwere ike ịmalite ịkpọtụrụ ndị ahịa gị, yana iji ngwaọrụ izi ozi anyị kpọtụrụ aha na mbụ.
Dị ka ọ dị n'ezie ị chọpụtala, Business WhatsApp adighi akwado nkwado ahia na WhatsApp. Ọ bụ ya mere ụlọ ọrụ ma ọ bụ ndị nwe ụlọ ọrụ ga-enwerịrị nọmba ịkpọtụrụ ha ma tinye ya na kọntaktị WhatsApp ha iji malite ịmekọrịta ndị ahịa ma ọ bụ tinye ya na otu.
Ọ bụ ezie na ibido ngwa ahụ nwere ike ịdị na-eche dị ka ihe siri ike, na ozi izi ozi agbakwunyere, WhatsApp Azụmaahịa nwere nnukwu ikike ịghọ ngwa ọrụ bara uru maka ụlọ ọrụ. Ọbụghị naanị nke ahụ, mgbakwunye nke ịkwụ ụgwọ WhatsApp kwesịrị ịrụ ọrụ dị ka ihe mkpali iji mee ka ngwa ahụ zuo oke.
La WhatsApp maka ngwa azụmahịa dị n'efu site na Playlọ Ahịa Google. Ọ bụ ezie na ọ dabara maka ụdị ụlọ ọrụ na azụmaahịa niile, enwere ike iji ya na ekwentị na-agba gam akporo 4.0.3 ma ọ bụ karịa. Nha ya buru 33MB.
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » eCommerce » Ahịa azụmahịa » WhatsApp Business bụ ngwa n'efu maka ụlọ ọrụ
N'ihi na ha ji nọmba m
Naanị ha zuru ekwentị m watsapp
Zaghachi Froylan sacul
Sellingre ire ere, nka nke ire mgbe erere ya
Otu esi emepụta ọwa na YouTube